आजसम्म कतिले ल’गाए कोरियामा को’रोनाको खो’प? – Korea Pati
April 26, 2021 April 26, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on आजसम्म कतिले ल’गाए कोरियामा को’रोनाको खो’प?
दक्षिण कोरियाले अहिलेसम्म करिब २० लाख मानिसलाई को’रोना बि’रुध्दको खो’प ल’गाएको छ। आउँदा दिनमा अ’झ छिटो र धेरैलाई खो’प लगा’उने गरि कोरियाले यो’जना बनाइरहेको छ।
कोरियामा अहिलेसम्म १९ लाख ३ हजार ७ सय ६७ जनाले खो’पको पहिलो डो’ज पाइसकेका छन। गत फेब्रुअरी २६ तारिखबाट कोरियामा खो’प अ’भियान सुरु भएको थियो।
अहिलेसम्म खो’प पाउनेहरुको संख्या कोरियाको कुल जनसंख्याको ३.६६ प्रतिशत हुन आउँदछ। कोरियामा अहिले कुल ५ करोड २० लाख जनसंख्या रहेको छ। अहिलेसम्म ६० हजार ६ सय २२ जनाले खो’पको दुबै डो’ज पाइसकेका छन।
खो’प पाउनेहरुमध्ये ११ लाख ४१ हजार १ सय ५४ जनाले ब्रिटिस स्वेडिस कम्पनी एष्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले बनाएको खो’प ल’गाएका हुन। त्यसैगरी ७ लाख ६२ हजार ६ सय १३ जनाले भने अमेरिकन कम्पनी फाइजरले बनाएको खो’प लगाएका हुन।
कोरिया रो’ग नि’य’न्त्रण तथा रो’क’थाम ए’जेन्सीका अनुसार अहिले दैनिक करिब १ लाख ३० हजार जनालाई खो’प लगाइएको छ। खो’प अ’भियान सुरु भएको पहिलो हप्तामा औषतमा करिब १८ हजार जनालाई खो’प लगाइएको थियो।
कोरियाले यो महिनाको अन्तिमसम्म अरु ३० लाख जनालाई खो’प लगाइसक्ने लक्ष राखेको छ भने जुन महिनाको अ’न्त्यसम्ममा १ करोड २० लाख जनालाई खो’प दिइसक्ने लक्ष छ।